Nhazi akụrụngwa ọdọ mmiri - Nnukwu ọdọ mmiri
AKW PKWỌ POLOL, Anyị na-emepụta, rụpụta ma weta akụrụngwa na usoro dị elu maka owuwu ma ọ bụ mmezigharị nke ọdọ mmiri azụmahịa, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ mmiri ọha na eze na atụmatụ mmiri.
Anyị nwere 25 afọ nke ahụmahụ na mmiri mgbasa akụrụngwa n'ichepụta. Anyị factory na China e-elekwasị anya na mmepe nke technologically elu, ike na-azọpụta, environmentally friendly, na-eri-irè ngwaahịa.
Anyị azụmahịa esịtidem gụnyere mmiri mgbasa filtration ngwá, disinfection ngwá, kpo oku na mgbe nile okpomọkụ akụrụngwa, spa akụrụngwa na ndị ọzọ na ngalaba. A na-enyefe ngwaahịa nkwado ndị ngalaba ndị a mepụtara na saịtị ọrụ kwekọrọ dịka mkpa anyị si arụ ọrụ, ma wụnye ma wuo ya n'okpuru nduzi nke ndị otu ọkachamara anyị.
* Ọdọ mmiri ọdọ mmiri
* Aja Myọcha Systems
* Ọdọ mmiri Disinfection Systems
* Akụrụngwa Waterpark
* Ọdọ mmiri Heating Systems
* Sauna na SPA sistemụ
A na-ere akụrụngwa ebe a na-egwu mmiri na sistemụ nke GREATPOOL na-eweta n’ụwa niile site na ntanetị nke ndị nnọchi anya, ndị na-ewu ụlọ, ndị na-ekesa ya na ndị ọrụ ngo. Ha na-eji nlezianya họrọ ma jiri nlezianya wụnye ngwaahịa, akụrụngwa na usoro anyị. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ime ka ngwaahịa anyị rụọ ọrụ na ebe igwu mmiri, spa na ụlọ ọrụ mmiri, ma ọ bụ ihe owuwu ọhụụ, mmegharị ma ọ bụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-arụsi ọrụ ike na igwu mmiri atụmatụ, imewe, ewu ma ọ bụ ọrụ, ma chọọ inyere itinye ngwaahịa na teknụzụ anyị aka na mpaghara ndị dị na mpaghara gị, biko kpọtụrụ anyị ozugbo.
Ka anyị nyere gị ọdọ mmiri akụrụngwa！
Igha mmiri nke Ọha, Igwu Pool Ngwọta, Igwu Mmiri Pool, Ọrụ Igba mmiri, Igwu Ulo Okpu, Rooftop Pool Ngwa,